विश्व पर्यटन नेटवर्कको चेतावनी: लक्जरी ट्राभल मार्केट नष्ट नगर्नुहोस्!
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » संघ समाचार » विश्व पर्यटन नेटवर्कको चेतावनी: लक्जरी ट्राभल मार्केट नष्ट नगर्नुहोस्!
संघ समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • मान्छे • जिम्मेवार • पर्यटन • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • Wtn
भविष्य COVID लक्जरी यात्रा को प्रकट भयो
पर्यटन सम्झनाहरू सिर्जना गर्नमा आधारित छ र सम्झनाहरू अद्वितीय र मनमोहक अनुभवहरूबाट आउँछन्। यदि पहिलो श्रेणीको यात्रा केही वर्ष पहिलेको आर्थिक यात्राको सेवा स्तरमा घटाइयो तर उच्च मूल्यमा, त्यसपछि व्यापार अन्ततः बन्द हुँदा ट्राभल पेशेवरहरू छक्क पर्नु पर्दैन।
कोभिड महामारीले पर्यटन उद्योगलाई ध्वस्त पारेदेखि नै यसका नेताहरूले आर्थिक नोक्सान पूर्ति गर्ने उपायहरू खोजिरहेका छन्।
उद्योगमा केहीले मूल्यहरू बढाएका छन्, अरूले वस्तु र सेवाहरूमा कटौती गरेका छन्, प्रायः मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखलामा असफलता, दक्ष कर्मचारीहरूको अभाव, वा कोविड-महामारीलाई दोष दिएका छन्।
विश्व पर्यटन नेटवर्कले माथि सूचीबद्ध समस्याहरू वास्तविक समस्याहरू हुन् भनी बुझेको छ।
डा. पिटर टार्लो, विश्व पर्यटन नेटवर्कका अध्यक्ष, र जो विश्वव्यापी यात्रा र पर्यटन सुरक्षा र सुरक्षाका विशेषज्ञ पनि हुन् बताउँछन्:
यद्यपि यी समस्याहरू उद्योगसँग सम्बन्धित छन् र विपद्को छेउबाट फर्केर काम गर्न खोज्ने उद्योगका लागि विलासी यात्राको शुल्कमा वास्तविक बहानाहरू भन्दा कम काम गर्न तर प्रायः जसो हुन सक्छ भन्दा धेरै कम वितरण गर्न यो उपयोगी छैन। अपेक्षा
यो विश्व पर्यटन नेटवर्क, 128 राष्ट्रहरूमा पर्यटन राष्ट्रहरू र व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै, यसका सदस्यहरूलाई यसका पूर्व ग्राहकहरूले यात्राका "राम्रा पुराना दिनहरू" मात्र नभई यात्राको रमाइलो र भव्यताको लागि भविष्यको प्रतीक्षा गर्ने तरिकामा पर्यटन पुनर्निर्माणमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। सांसारिकलाई यादगार बनाउनुहोस्।
पुनर्निर्माणको युगमा ट्राभल र पर्यटन उद्योगले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर र यसले प्रदान गर्ने सेवामा गिरावट देख्न सक्दैन। प्रस्तावित उत्पादन र सेवाहरूको गुणस्तरमा यस्तो गिरावटले दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन उद्योगलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ र दीर्घकालीन रूपमा यसका नेताहरूले पैसा गुमाउनेछन्।
यदि ट्राभल र पर्यटन उद्योगलाई यी कठिन समयमा सफल बनाउनु हो भने, यसले आफूलाई पीडितको रूपमा मात्र देख्नु भन्दा बढी गर्नुपर्दछ न त यसले आफ्ना भुक्तान गर्ने ग्राहकहरूलाई खराब सेवा र खराब उत्पादनको गुणस्तरको शिकार बनाउन सक्छ।
जब यात्रा झन्झट बन्छ, जब यात्राको रमाइलो यात्राको काम बन्छ, तब जनसम्पर्कका कुनै पनि नौटंकी वा मार्केटिङले जनताको निराशा छोप्न सक्दैन। बरु, प्रतिवद्धताहरू पूरा हुन नसक्दा पर्यटन उद्योगले विश्वसनीयता संकटको सामना गर्नेछ।
यात्रा गर्ने सार्वजनिक न त भोली छ न त अनभिज्ञ छ र सेवा र उत्पादनहरूको गुणस्तर घट्दै जाँदा वा कटौती गरिएको छ, यात्रीहरूले नयाँ स्थानहरू फेला पार्नेछन् जुन कम लागतमा उच्च गुणस्तरको सेवा र उत्पादनहरू प्रदान गर्न इच्छुक छन्।
बस्ने ठाउँहरूले मूल्य परिवर्तन भएको अनुरूप सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ। लक्जरी होटलले तीन दिनमा एक पटक कोठा सफा गर्ने घोषणा गर्न सक्दैन। यदि लक्जरी मूल्य चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने लक्जरी सेवा प्रस्ताव गर्नुहोस्। भाउ घटाउनु भएन !
फिर्ता ल्याउनुहोस् र नयाँ लाभहरू सिर्जना गर्नुहोस्। नि:शुल्क अखबार, वा विशेष गुड-नाइट चकलेट उपलब्ध गराउनाले पैदल यात्रीको बसाइलाई विशेष र यादगार बसाइमा परिणत गर्छ।
लजिङ उद्योगको लागि के सत्य हो, एयरलाइन उद्योगको लागि पनि सत्य हो। यदि एयरलाइन्स, फर्स्ट वा बिजनेस क्लासमा पनि, आकाशमा बसहरू बाहेक अरू केही बन्न सकेन भने अन्ततः यात्रुहरूले अन्य विकल्पहरू फेला पार्नेछन्। आजको संसारमा व्यापार प्रायः धेरै कम झन्झट र लागत संग सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
एयरलाइन्सहरूले आफ्नो ए ला कार्टे शुल्क संरचना हटाउन आवश्यक छ।, उनीहरूले जनतालाई देखाउन आवश्यक छ कि उनीहरू सरकारी बेलआउट खोज्दा मात्र होइन तर राम्रो समयमा पनि ध्यान दिन्छन्।
पर्यटन र ट्राभल व्यवसायहरूले यात्रुहरूका लागि प्रयोगकर्ता अनुकूल घण्टाहरू विकास गर्न आवश्यक छ। साँझ4बजे होटलमा चेक-इन र 11:00 मा चेकआउट गर्नु मूर्खता हो जब होटलहरू पूर्ण रूपमा ओगटेका छैनन्। त्यस्ता नीतिहरू अन्तमा महँगो विज्ञापनहरू भन्दा धेरै महँगो हुन्छन् जसले प्रतिज्ञाहरू बनाउँदछ जुन अन्तमा भ्रामक हुने गर्दछ।
सेवा गरिएका उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार गर्नुहोस् र यी उत्पादनहरूलाई मूल्य शुल्क प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्। यदि कुनै होटल वा रेस्टुरेन्टले प्रिमियम शुल्क लिन्छ भने, खानाको गुणस्तरले त्यो शुल्क प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। धेरै होटेल रेस्टुरेन्टहरूले कुना काट्छन् तर प्रिमियम मूल्यहरू चार्ज गरिरहेका छन्। तल्लो रेखा यो हो कि जब जनता लागत र गुणस्तर बिक्री र प्रतिष्ठा बीचको खाडलको बारेमा अझ बढी सचेत हुन्छ र प्रतिष्ठा कम हुन थाल्छ।
तपाईंले दिन नसक्ने वाचा नगर्नुहोस्। पछिल्लो शताब्दीको उत्तरार्धमा यात्रा र पर्यटन उद्योगले आफ्नो विश्वसनीयता पुन: प्राप्त गर्न संघर्ष गर्यो। त्यसपछि 9-11 ले उद्योगको आवश्यकताप्रति जनतालाई सहानुभूतिपूर्ण बनायो। एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकको अन्त्यसम्ममा ट्राभल एण्ड टुरिजम उद्योगले त्यो सहानुभूति गुमाएको छ। यात्रा र पर्यटनले Covid वर्षहरूमा राम्रो इच्छा र समझको ठूलो सौदा पुन: प्राप्त गर्यो। अब त्यो असल इच्छालाई कार्यमा परिणत गर्ने र वास्तविकता झल्काउने मूल्यहरूमा नयाँ र नवीन उत्पादनहरू सिर्जना गरेर यात्रा र पर्यटन उद्योगले आफ्ना ग्राहकहरू र ग्राहकहरूलाई कत्तिको कदर गर्छ भनेर जनतालाई देखाउने समय आएको छ।
मार्केटिङको उत्तम रूप भनेको राम्रो उत्पादन र राम्रो सेवालाई रमाइलो र सुरक्षित र सुरक्षित वातावरणमा प्रस्तुत गर्नु हो। यदि यात्रा र पर्यटनले यी आधारभूत सुझावहरू पालना गर्यो भने संसारको सबैभन्दा ठूलो उद्योग फेरि ठूलो बन्नेछ।
विश्व पर्यटन नेटवर्क र सदस्यता बारे थप जानकारी www.wtn.travel मा जानुहोस्